world fucking sex to clover : မှန်ရာကိုထွက်ဆိုပါမည် ပေါက်ကျော်မ
world fucking sex to clover
မီးဇာ စိတ်က အပြောင်းအလဲမြန်လွန်းလှပါသည်။
ကိုစစ်အောင်နှင့် အိမ်နီးပါးချင်းဖြစ်သော်လည်း မီးဇာ ခေါ်ချင်မှခေါ်သည်။ ပြောချင်မှလည်း ပြောသည်။ သို့သော် နောင်လတ်နှင့် ပတ်သက်လာသောအခါ ကိုစစ်အောင် မိတ္တူကူးစက်ဆိုင်သို့ မကူးချင်ပဲလဲ ကူးလျက်၊ မသွားချင်ပဲလဲ သွားလျက် မီးဇာ အောက်ကျို့ခံလျက် အောက်စီးမှ ဆက်ဆံလာရသည်။ ထိုသို့ အောက်စီးမှ ဝင်ရသည်က အသဲအသက်မက ချစ်ရလွန်းသူ- နောင်လတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်သည်။
နောင်လတ်က မီးဇာဟု ချစ်စနိုးခေါ်တတ်သော နောင်လတ်သည် ဇာနည်နွယ်ဟူသော မီးဇာနာမည်ရင်းကိုပင် ပျောက်အောင် မီးဇာကို လွှမ်းမိုးသူဖြစ်၏။ နောင်လတ်နှင့် (၁၀)တန်းမှာကတည်းက ချစ်ခဲ့ကြသည်။ နောင်လတ်မျက်နှာကို မြင်တိုင်း မီးဇာရင်ခံတတ်သည်။ နောင်လတ်၏ အကြည့်ပြာပြာဝေဝေလေးမှာ မီးခိုးမှိုင်းမိသော လိပ်ပြာလေးနှယ် ယစ်မှုးသွားချင်သည်။ ဤမျှအထိ နောင်လတ်ကို မီးဇာချစ်ခဲ့ရပါသည်။
နောင်လတ်ကလည်း ယောက်ျားပီသသည်။ သိပ်ချစ်ရလွန်းသူတွေပေမဲ့ နောင်လတ် အခွင့်အရေးကို ပိုမယူ။ နှင်းဆီဖူး နှုတ်ခမ်းချိုချိုလေးကို စုပ်ယူနမ်းရှိုက်ရာ၌ပင် နောင်လတ်က တမြတ်တနိုး တယုတယလေး ပြုစုတတ်၏ ။ မေတ္တာ၏ အတိမ်အနက်ကို ချိန်ဆတိုင်းတာနိုင်သော အချစ်ပြဒါးတိုင်မျိုးရှိလျှင် ရေဆူအမှတ်ကို ကျော်လိမ့်မည်ထင်သည်။ နက်နဲမှုသံယောဇဉ်ကို တိုင်းပြနိုင်သော သာမိုမီတာသည်လည်း မီးဇာနှင့်နောင်လတ်တို့အတွက်ပဲဖြစ်မည်။
ယခုတော့ နောင်လတ် ဆေးမှုနှင့် ကွိုင်ပူနေလေပြီ။ နောင်လတ်အာမခံမရဘဲ အချုပ်ထဲရောက်နေသည်။ နောင်လတ် ဆေးစွဲနေမှန်း မီးဇာ လုံးဝမရိပ်မိခဲ့ချေ။
ယခုတော့ နောင်လတ်မိဘများလဲ မျက်ကလဲ ဆံပြာဖြစ်နေကြသည်။ မီးဇာကိုလည်း အကျိုးအကြောင်းပြောပြကြပြီး တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပါရန် မျက်ရည်စမ်းစမ်းနှင့်ပြောကြ၏။ မီးဇာ၏ အချစ်ကို သက်သေပြရန် အချိန်ရောက်ပြီ။ မီးဇာ နောင်လတ်ကို ဘယ်လောက်ချစ်သည်ဆိုသည့် အနေအထားကို ပြခွင့်ရသည့် အချိန်အခါလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကိုစစ်အောင်ဆိုသော ရှေ့နေ၊ ခြံချင်းကပ်လျှက်က ပုဂ္ဂိုလ်မာကျောကျောကို ချဉ်းကပ်ရသည်။
" နောင်လတ်နဲ့ သမီးက ဘယ်လိုတော်စပ်လို့လဲ "
" သမီးချုစ်သူပါ.. ဦး.. "
ဟုတ်တယ်လေ.. သူက သမီးခေါ်မှတော့ ကိုယ်ကလဲ ဦး လုပ်ထည့်လိုက်ရသည်ပေါ့။ မှတ်ပုံတင်ကို စစ်ဆေးကြည့်လျှင် မီးဇာအသက်က (၁၈)နှစ်၊ ကိုစစ်အောင်က (၃၅)နှစ်။ ဒီလောက်ပဲရှိကြသည်။ ခက်သည်က ခုအခြေအနေမှာ သမီးနဲ့ဦးတွေက ပေါမှပေါ။ သည်အခေါ်အဝေါ်တွေက ရင်ခုန်မှုလမ်းဆီကို တွန်းပို့နေသလိုလို။
ဘဲကြီးက အသားယူတာလားဟု မီးဇာတွေးမိသည်။ " မဇာနည်နွယ် " ဘာညာရှည်ရှည်လျားလျားခေါ်ရင်ကော ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ။
" ချစ်သူတွေပါ "ဟု မဆိုင်းမတွဖြေလိုက်နိုင်သော ကိုယ့်အသဲနှလုံးကိုပင် မီးဇာ ကျေးဇူးတင်လိုက်မိသေးသည်။
ကိုစစ်အောင်က ဟင့်ကနဲ လည်ချောင်းထဲမှ ဆောင့်ထွက်လာသော မရယ်ချင့်ရယ်ချင်အသံဖြင့် ရယ်သည်။
" ရှေ့နေ ဌားခိုင်းထားတယ်မို့လား "
" ဟုတ်ပါတယ်.. ဦးထွန်းလူက နောင်နောင့်မိဘတွေက ဌားထားတာပါ.. သမီးဘက်ကလဲ ပိုခိုင်မာအောင် ဦးကို အကူအညီတောင်းတာ.. "
အေးပေါ့လေ.. ခြံချင်းကပ်လျက် ရှေ့နေရှိရဲ့သားနဲ့ တခြားတယောက်ကို အားကိုးရတယ်ဆိုတော့ ကိုစစ်အောင်အောက်သွားမှာပေါ့။
" အမှုက ရုံးတင်ဖို့ နီးပလား.. သမီး "
" နက်ဖြန်ပဲ ဦး.. ဒါကြောင့်.. "
" သူ့သွေးကိုရော စစ်ပြီးပလား "
" ဆရာဝန်စစ်ချက် မနက်ထွက်မှာ.. "
" တစ် အချက်.. ဆရာဝန်ဆေးစစ်တဲ့စာလဲ အရေးကြီးတယ် "
" ဟုတ်တယ်.. သမီး.. အဲဒါ.. "
" ဆရာဝန်က ဘယ်သူတဲ့လဲ "
" ဒေါက်တာဟန်ဝင်း.. တဲ့.. "
" ဟား.. ဟန်ဝင်းလား.. ဦး သူငယ်ချင်းပဲ "
မီးဇာ ပီတိလှိုင်းက ဟုတ်ကနဲ ထတောက်သည်။
" အို.. ဟုတ်လား.. ဟယ်.. အဆင်ပြေလိုက်တာ.. "
" ကြာတယ်.. ဟန်ဝင်းဆီသွားကြရအောင်.. သမီးပါလိုက်ရမယ် "
" ဒါပေါ့.. "
မီးဇာ အပြုံးလန်းလန်းလေး ဖတ်ကနဲပွင့်ကာ ကိုစစ်အောင်ကို အထင်တကြီးလေးမော့ကြည့် လိုက်မသည်။ စစ်အောင်ကလဲ မီးဇာအား တချက်ပြန်ကြည့်သည်။ တံထွေး"ဂလု "ကနဲ မြိုချလိုက်သည်ကိုတော့ မီးဇာသတိမထားမိလိုက်ချေ။
________you create opportunities by P E R F O R M I N G , not C O M P L A I N I N G________
စေတနာမှန်ရင် ကံဖြစ်မယ် ဟီ ဟိ
Re: မှန်ရာကို ထွက်ဆိုပါမည်
« Reply #1 on: December 19, 2012, 05:48:23 PM »
ကောင်မလေးက ဖြူဖြူလုံးလုံးနဲ့ တင်းတင်းရင်းရင်းလေး။ ဖူးပြီးကာစ ပွင့်အာရန် အားယူနေသော ဇလပ်ပန်းလေးနှယ် လှပစိုပြေလွန်းသည်။ ခပ်တိုတိုဝတ်ထားသော ထမီအောက်နားဆီမှ သလုံးသားနုနုလေးများထက်၌ ခြေသလုံးမွှေးမဲမဲလေးများ ခပ်ထူထူလေးပေါက်နေသည်။
ဒေါက်တာဟန်ဝင်း ခပ်မျှင်းမျှင်းသက်ပြင်းခိုးရှိုက်၏။ ဖိနပ်သဲကြိုး ဖြူဖြူသေးသေးလေးက ခြေခုံသားဖောင်းဖောင်းလေးထဲ နစ်ဝင်နေသည်။ ခြေသည်းလေးများက ပန်းနုရောင်ပြေးလျက် ကနုကမာသွေးပြေးနေသည်။ အဆင့်အတန်းရှိသော ဥစ္စာပေါ ပညာတတ် မိန်းကလေးတယောက်အသွင်မှန်း မြင်ရုံနှင့်သိသာ၏။
" ကဲ..ဆို ရှေ့နေကြီး ဘာကိတ် "
" ဒါ နောင်လတ် ချစ်သူပဲ.. ဒေါက်တာဟန်ဝင်း "
" အယ်.. ဦး ကလဲ.. "
မီးဇာက လက်ထဲမှ ခေါက်ထီးလေးကို လိပ်ပွတ်ရင်း ခေါင်းငုံ့ကာ ရှက်ပြုံးပြုံးလိုက်ရှုးဆို၏။
" လိုရင်း တိုရှင်းဘဲ ကောင်းတယ်လေ.. ဦးတို့မှာ အချိန်မှ သိပ်မရှိတာ.. အဲ.. နောင်လတ် ဆေးစာအတွက်လာတွေ့တာ "
" အော.. "
ဒေါက်တာဟန်ဝင်း၏ "အော"ဆိုသော အသံကြီးနှင့် မျက်လုံးများ လင်းလက်သွားပုံက မီးဇာစိတ်ကို တမျိုးကြီးဖြစ်စေ၏။
" ရပါတယ် အဆင်ပြေသွားမှာပါ "
မီးဇာရင်သည် ဒေါက်တာဟန်ဝင်း စကားကြောင့် တဒိန်းဒိန်းခုန်အောင် ဝမ်းသာသွားသည်။
" ဟိုလေ.. မီးဘက်က လိုတာရှိရင်.. ပြော..ပြောပါနော်.. "
တံထွေးလေးမြိုချရင်း ဝမ်းပန်းတသာလေး အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ပြောလိုက်သော ချာတိတ်မလေးအား စစ်အောင်နှင့်ဟန်ဝင်းက ကျေနပ်စွာပြုံးကြည့်ကြ၏။
" ဒီလိုကွဲ့.. နောင်လတ် ဆီးထဲမှာရော.. သွေးထဲမှာပါ မူးယစ်ဆေးတွေ့ရှိနေတာတော့ အမှန်ဘဲ "
" ရှင်... "
မီးဇာ မျက်လုံးလေး ဝိုင်းသွားရပြန်သည်။
" ဆေးအလွဲသုံးစားသောက်စားမူးယစ်မှုဟာ ခုခေတ်မှာ အင်မတန်ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုတခုဖြစ်တယ်.. ဖိလစ်ပိုင်မှာဆို တချို့ကို သေဒဏ်ပေးပစ်တာ "
" ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စက ဦးတို့လက်ထဲမှာပါ.. ဟဲ.. ဟဲ "
" ဒါဘဲလေ.. ဒါကြောင့် မင်းဆီ ပြေးလာခဲ့တာ.. မင်းဆီက ဆေးစာရရင်.. ကိုယ် မနက်ဖြန် တရားခွင်မှာ အပီထုလိုက်ရင် ဟဲဟဲ နောင်လတ်တယောက် ကွင်းလုံးကျွတ်.. "
သူတို့ကဲ့သို့သော ဆရာဝန်နှင့် ရှေ့နေတယောက်ရှိနေမှ မီးဇာ ဘာစိုးရိမ်ရတော့မည်နည်း။
" သမီး အားကိုးပါရစေ.. ဦးတို့ရယ်.. "
မျက်ရည်ကြည်လေး ဝေ့ဝေ့ဝဲဝဲနှင့် မီးဇာ အသံတုန်တုန်လေးကို နားထောင်ရင်း ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်က နှစ်သိမ့်ပြကြသည်။
" လူငယ်တွေဘဲကွယ်.. မှားတဲ့အခါမှားမှာပေါ့.. နောက်ကို ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ဘဲ ဦးတို့က လိုချင်တာပါ "
" မီး.. သူ့ကို ပြောပါ့မယ်.. "
" ကဲ.. လာ.. နောင်လတ် သွေးကိုပြမယ် "
ဟန်ဝင်းက တိုက်အနောက်ဘက်ကို သွားသည်။ ကိုစစ်အောင်က မီးဇာကို "လာ"ဟု အံကြိတ်ပြီး လက်ယပ်ပြကာ နောက်သို့လိုက်သွား၏။
အခန်းက ကျယ်ဝန်းသည်။ သို့သော် ဆရာဝန်ပစ္စည်းတစုံတရာမျှ မီးဇာရှာမတွေ့။ အခန်းအလယ်၌ ဆိုဖာခုံများရှိသည်။ ထိပ်တွင်နေရာယူထားသည်က ဗီဒီယိုစက်ကြီးတလုံးဖြစ်၏။ ထိုစက်ရှိရာသို့ ထိုင်ခုံအားလုံးမျက်နှာမူထား၏။
" လာ သမီး.. ဒီမှာထိုင်.. ကိုစစ်အောင် အပြင်တံခါး ပိတ်ထားလိုက်ဗျာ.. တယောက်ယောက် ဝင်လာရင် အလကားနေရင်း ကျုပ်တို့ကွိုင်တက်နေမယ် "
ကိုစစ်အောင်က တံခါးသွားပိတ်ကာ သော့ခတ်လိုက်၏။ လိုက်ကာ ပါးပါးလေးများကို ပြတင်းတံခါးများတွင် တဖက်စီ ချီထားရာမှ ပေါက်စေ့လိုက်ပိတ်လိုက်သည်။ အလင်းရောင်သည် တဝက်ခန့်လျော့နဲသွားသည်။
" ဒီမူးယစ်ဆေးဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် အတော်ဒုက္ခပေးနေတာ.. ဒီအခွေကိုကြည့် "
ကိုဟန်ဝင်းက ဗီဒီယိုတိတ်ခွေတခွေကို ဗီဒီယိုပလေယာစက်အတွင်းထည့်ပြီး ခလုတ်နှိပ်လိုက်သည်။ တီဗီစကရင်ပြားပေါ်ဝယ် အပြာရောင်အစက်အပျောက်များ ရှုပ်ထွေးပြေးလွှားနေပြီးမှ ဖတ်ကနဲ ထင်ရှားကြည်လင်သော အရုပ်များပေါ်လာသည်။ အသံထိန်းကိရိယာကို အနည်းငယ်မြှင့်လိုက်သည်။
« Reply #2 on: December 19, 2012, 05:50:06 PM »
" အာ.. အင်.. အင့်.. အင့်.. အိုး.. အိုး အိုး.. "
ဗီဒီယိုထဲမှ ခပ်အုပ်အုပ် ညီးသံလေးထွက်လာသည်။ စကရင်ပြားပေါ်၌ ဖြူဝင်းသော ကောင်မလေးက ဝတ်လစ်စလစ်လေး ကုန်းပေးထားပြီး ခန္ဓာကိုယ် ထွားကြိုင်းလှသော ကပ္ပလီကြီးက အဝတ်မဲ့ခန္ဓာနှင့်ပင် ပြင်သစ်မလေးနို့နှစ်လုံးကို ဂျိုင်းအောက်မှ ဆွဲယူကာ ညင်ညင်သာသာလေး ညှောင့်သွင်းပေးနေပုံ ပေါ်လာသည်။
" အဲဒါ မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ မိန်းကလေးတယောက် ဆေးရဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေးဆပ်နေရတာလေ.. ဘယ်လောက် ရင်နာဖို့ကောင်းသလဲ "
မီးဇာမျက်နှာကို တဝက်ငုံ့ထားရင်း တီဗီစက်ကို မဝံ့မရဲလှမ်းကြည့်နေမိသည်။
" ဆေးရဖို့ဆိုရင် သူတို့ဘာမဆိုလုပ်တယ်လေ.. ဒါဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးသားကောင်ဘဝကို ရောက်တဲ့သဘောပဲ "
ဒေါက်တာဟန်ဝင်းက တည်ငြိမ်စွာ ဘာမှမထူးဆန်းသလို ရှင်းပြနေသော်လည်း မီးဇာတကိုယ်လုံး ထူပူဖိန်းရှိန်းကာ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်နေ၏။ ထိုတခန်းပြီးသွားပြီး ကပ္ပလီကြီး၏ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးကြီးကို ခလေးမလေးက စုံကိုင်၍ လျှာလေးဖြင့် ယက်လိုက်.. စုပ်လိုက်.. ငုံ့ပြီးစုပ်သွင်းလိုက် ဖွာလံကျဲကာကျလာသော ဆံစများကို ခါတင်လိုက်ပြုမူနေပုံ အနီးကပ်မြင်ကွင်း ပေါ်လာပြန်သည်။
လီးကြီးက အတော်ကြီးသည်။ မီးဇာမမြင်ဖူးလောက်အောင်ကို ကြီးမားသည်။ ငြုပ်ကျည်ပွေ့ကြီးတချောင်းပမာလဲ တုတ်ခိုင်ကာ တံထွေးတွေနှင့် အရောင်တွေလက်နေသည်။
ကိုစစ်အောင်က စီးကရက်တလိပ်ကို သောက်ရင်း ငြိမ်သက်စွာကြည့်နေသည်။ ဘာတခွန်းမျှ ဝင်မပြောပေ။
" သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ ကာမစပ်ယှက်နည်းတွေဟာလဲ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အေ့(စ်)ဆိုတဲ့ ရောဂါနဲ့ ခြိမ်းခြောက်လာနေတယ်.. ဒါ.. ဒီလို စုပ်တာဟာ သူတို့အတွက်တော့ ရိုးနေပြီလေ "
ရိုးနေပြီဆိုသော မြင်ကွင်းကိုပင် မီးဇာမကြည့်ရဲတော့ပဲ မျက်နှာကို ငုံ့ပစ်လိုက်သည်။
ရင်ထဲ၌ အောင့်ကျင်မောဟိုက်လာအောင် ရင်ခုန်နေသည်။ စကားသံမထွက်နိုင်အောင်ကို လှိုက်ကာ လှိုက်ကာ မောနေသမို့ စကားမဆိုနိုင်တော့။ နောင်နောင့်သွေးကို ပြမည်ဆို၍ သည်အခန်းထဲလိုက်ခဲ့မိခြင်းဖြစ်သည်။
"အခု ဒါတွေပြနေတာက ဘာသဘောလဲ.. အို.. "
မီးဇာ ကတုန်ကရီနှင့် ခြောက်ခြားလာ၏။ နှာသီးဖျားလေးတွင် သေးငယ်သော ချွေးဥလေးများ သီးမို့လာသည်။
" သမီး.. "
ကိုစစ်အောင်က မီးဇာထိုင်နေသော ဆိုဖာတွင် နီးကပ်စွာ ပူးကပ်ထိုင်ချလိုက်ရင်း လက်တဖက်က မီးဇာပခုံးလေးကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ဝန်းကျင်သည် ပူလောင် လှိုက်ဖိုစရာ၊ မြင်ကွင်းတခုလုံး ဝေဝါးမှေးမှိန်သွားသည်။
" ကျမ ပြန်တော့မယ်.. "
မီးဇာက ဆတ်ကနဲ ထ ရပ်လိုက်သည်။ ဒူးတွေက မခိုင် ယိုင်နဲ့ ချိနွမ်းကာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေလေသည်။
" အိုး.. နေအုံးလေ.. နောင်လတ်ကိစ္စ "
" ဟင့်အင်း.. ဟင့်အင်း.. "
မီးဇာ ခေါက်ထီးလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ကိုင်ရင်း မျက်နှာကို တွင်တွင်ငုံ့ကာ ခေါင်းကို ခါရမ်းလိုက်သည်။ တီဗီစကရင်ပေါ်တွင် နုပျိုငယ်ရွယ်သော ပြင်သစ်မလေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ကပ္ပလီကြီးက ခေါင်းကြီးထိုးသွင်းကာ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် ဖြဲလျှက် လျှာကြီးဖြင့် ယက်နေသည်ကို အနီးကပ်တွေ့လိုက်ရပြန်သည်။
မီးဇာ မျက်လုံးအစုံကို ဇွတ်မှိတ်ပစ်လိုက်သော်လည်း မမှီတော့။ ထို့ကြောင့်လည်း ကြက်သီးလေးများ တဖျင်းဖျင်းထကာ အသက်ရှုမဝသလိုဖြစ်လာကာ ဒိတ်ကနဲ ဒိတ်ကနဲ ရင်ခုန်နှုန်းက ရင်ဘတ်မှ ဆွဲပြားလေးလှုပ်အောင်ပင် ပြင်းထန်လှ၏။ ရင်သားနှစ်လုံးကြား ရင်ညွန့်လေးက ဖောက်ကနဲ ဖောက်ကနဲကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်နေသည်။ မောလာသည်။ သွေးသားတွေဗြောင်းဆန်နေပြီး အသားလေးတွေပင်တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်၍နေချေသည်။
" ဒီကားပြီးမှ ပြန်ကြရအောင်လေ "
" အို.. ဟင့်အင်း.. ဟင့်အင်း.. ကျမ မကြည့်ရဲဘူး.. "
" ဒါဆို နောင်လတ်ကိစ္စ မေ့လိုက်ပြီပေါ့ "
" မသိဘူး.. မသိဘူး.. ဟင့်.. ဟင့်.. ဟင့်.. "
« Reply #3 on: December 19, 2012, 05:51:35 PM »
မီးဇာက မခံမရပ်နိုင်သည့်အဆုံး တဟင့်ဟင့် ငိုချလိုက်၏။ ဒေါက်တာဟန်ဝင်းက အနားရောက်လာသည်။ သူ့မျက်နှာက လုံးဝတည်ငြိမ်လျက် အိနြေ္ဒရနေသည်။
" ဆောရီးပဲကွယ်.. ဦးတို့က သမီးကို အတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မယ် ထင်နေတာ.. နောင်လတ်အမှုကို ဒီကိစ္စတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေလို့ တရားခွင်မှာ လိုအပ်ရင် သမီးဝင်ပြောနိုင်အောင် ပြတာပါ "
" ဘာမှ.. မဆိုင်ဘူး.. "
မီးဇာပါးစပ်မှ လွှတ်ကနဲ ဒေါသလေးနှင့် အော်လိုက်သည်။
ပြီးမှ စိုးရိမ်စိတ်ကလေးဝင်ကာ ဒေါက်တာဟန်ဝင်းကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ဒေါက်တာဟန်ဝင်းမျက်နှာက ပုစ္ဆာလွယ်လွယ်လေးကို မဖြေနိုင်သော တပည့်တဦးကို ကြည့်သလို ဂရုဏာသက်စွာကြည့်လိုက်သည်။ မီးဇာစိတ်ဝယ် ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပြန်သည်။
" အား.. အိ.. အင့်.. အိုး.. အိုး.. အိုး... အိုး အိုး.. "
တီဗီစကရင်ပြားပေါ်တွင် ပြင်သစ်မလေးက အပေါ်မှ ခွထိုင်ကာ ကပ္ပလီကြီး၏ လီးကြီးကို သူမ စောက်ပတ်လေးထဲ ကိုင်ထည့်ပြီး တအားအား တအိုးအိုးနှင့် တက်လိုးနေပုံပေါ်လာပြန်သည်။ မီးဇာ မျက်စိကို လွှဲပစ်မိပြန်၏။
" ကိစ္စတွေပြီးမှ သမီး ဦးတို့စေတနာတွေကို နားလည်လာမှာပါ.. ကဲ.. ကိုစစ်အောင် အပြင်ခဏ ထွက်ပေးလိုက်ပါဗျာ.. သူတယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်ပါစေ "
" အို.. ဟင့်အင်း.. ကျမ မကြည့်ချင်ဘူး.. ပြန်မယ်.. "
ကိုစစ်အောင်က မီးဇာတင်ပါးလေးကို ခလေးချော့သလို ပုတ်လိုက်ရင်း အေးချမ်းစွာ ပြောသည်။
" သမီးက ခေတ်နောက်ကျသေးတာကိုး.. ဟဲ ဟဲ "
မီးဇာက ကိုစစ်အောင်လက်ကို ပုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ တကိုယ်လုံးမှာလည်း သိသိသာသာကြီးတုန်လှုပ်လာသည်။
" ဒေါက်တာ ဆေးကိစ္စ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. မနက်ဖြန်ဆို ရုံးတင်တော့မှာ "
" အရှိအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ.. ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ "
ဒေါက်တာဟန်ဝင်း စကားအဆုံး၌ မီးဇာရင်ဝယ် သောကမီးတောက်လေး ဟုန်းကနဲ ထလာရပြန်သည်။
" သ..သမီး.. နားမလည်လို့.. တခုမေးပါရစေ.. ဦးတို့ရယ်.. "
" မေးလေ.. မေးပါ သမီး သံသယရှင်းအောင်မေးပေါ့ "
" ဒါ.. ဒါတွေ ပြနေတာက.. နောင်နောင့် အမှုနဲ့ဘာပတ်သက်လို့လဲ..ဟင်.. ဟို..သမီးမှားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ..နော်.. "
ကိုစစ်အောင်က ထောင်ချောက်နားတိုးလားသော ယုန်သူငယ်ကို ကြည့်သော မျက်လုံးမျိုးနှင့် ကျေနပ်စွာ ပြုံးရင်း ကြည့်လိုက်သည်။ ဘယ်လိုဖြီး၍ ဘယ်သို့ ဒိုင်တွေသွင်းရမည်ကိုလည်း အလေ့အကျင့်ရနေသော ကလိမ်ကကျစ်ဦးနှောက်က လှစ်ကနဲ အဖြေရပြီးသား။
" အာ.. ဒါ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းဘဲ.. မေးကိုမေးရမယ် "
ကိုစစ်အောင်၏ တည်ငြိမ်သယောင် မျက်နှာက မီးဇာကို ထပ်မံ၍ ဇဝေဇဝါဖြစ်စေပြန်သည်။ စင်စစ်၌
ကိုစစ်အောင်တို့နှစ်ယောက်မှာ ပေါက်ကွဲလု မီးတောင်နှယ် လီးတောင်နေကြလေပြီ။
အရိုင်းမလေးကို အယဉ်ဖြစ်အောင်၊ အကျဉ်းကို အကျယ်ချဲ့ရာ၌ စစ်အောင်နှင့် ဟန်ဝင်းက ဘက်ညီကြသည်။
« Reply #4 on: December 20, 2012, 03:00:24 PM »
" မူးယစ်ဆေးဥပဒေမှာ အလွဲသုံးစား အလွန်အကျွံစားသုံးမှီဝှဲမှုအတွက် အရေးယူနိုင်တယ်.. နောင်လတ်က မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူတယောက်ဆိုတာ သူ့သွေးနဲ့ ဆီးက သက်သေခံနေပြီ.. ဒီတော့ သူ့ကို ကယ်နိုင်တဲ့နည်းက တနည်းဘဲရှိတယ် "
ကိုဟန်ဝင်းကတဖက်၊ ကိုစစ်အောင်ကတဖက် မီးဇာ၏ မွှေးပျံ့သင်းထုံသော ကိုယ်လုံးလေးကို ကြားညှပ်၍ ပူးကပ်ထိုင်လိုက်ကြ၏။ ထွေးထွေးအိအိ ပခုံးသားလေးများ အေးစက်နူးညံ့နေပါကလား။ အလယ်တွင် ထိုင်နေသော မီးဇာရင်သည် တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေ၏။ နောင်လတ်မှလွဲ၍ မည်သည့်ယောက်ျားလေးနှင့်မျှ အရောတဝင်မလုပ်ဖူးသော မီးဇာနှလုံးသားနုနုလေးသည် ရင့်မာကောက်ကျစ်သော ကျားငစဉ်းလဲနှစ်ကောင်ကြား၌ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ပန်းထွက်အောင် ခြေမွခံရတော့မည်ကို ယုန်သူငယ်မလေးမီးဇာ လုံးဝမသိရှာပါပေ။
" အား.. အီး.. ပြွတ်.. ဘွတ်.. အ.. အာ.. အ.. "
လုပ်ပြန်ပြီ.. မိနစ်အတော်ကြာမျက်နှာလွှဲထားမိသော တီဗီဖန်သားပြင်ဝယ် သေးကျဉ်းသော အပေါက်လေးထဲသို့ ကပ္ပလီကြီး၏ သီးမွှေး လီးကြီးက မညှာမတာ ထိုးဝင်သွားပုံကို အနီးကပ်ပြထားသည်။ မြင်ကွင်းအတွင်း အကြောပြိုင်းပြိုင်းနှင့် လီးမဲမဲကြီးမှာ ပြောင်လက်ကာ ကောင်မလေးစောက်ပတ်အတွင်းသို့ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း ဖြေးညှင်းစွာ လိုးဝင်သွား၏။
" အား.. " စူးစူး အုပ်အုပ်ကလေး အံကြိတ်၍ အော်ရင်း လေးဘက်လေးထောက်ထားသော ကောင်မလေးသည် ခါးလေးကုန်းကာ တွန့်တက်သွားပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေ၏။ မီးဇာမျက်လုံးများ က ရုတ်တရက် ဖန်သားပြင်ဆီက ခွာမရ။
" ပြွတ်.. ဘွတ်.. ပြစ်.. ဟင့်.. ဟင့်.. ပြွတ်.. "
" အ.. အား.. အဟင့်.. အဟင့်.. အဟင့်.. "
မီးဇာပေါင်သားနှင့် ဗိုက်တပြင်လုံး ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကြက်သီးဖုတွေ ဖြင်းကနဲထသွားသည်။ အောက်ပိုင်းတခုလုံးမှာ ယားကျိကျိနှင့် နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်သွား၏။ ဟန်ဝင်းလက်တဖက်က မီးဇာ၏ ပြည့်ဖြိုးတုတ်ခိုင်သော ပေါင်ကြီးပေါ်သို့ ရွှရွှလေး ပွတ်ထိလာသည်။ မီးဇာအသက်ရှုရပ်သွားသည်။ အသက်ကို အောင့်ပြီး အကြည့်ကိုရှေ့သို့ ပို့ထားမိသည်။
ကိုစစ်အောင်လက်တဖက်ကလဲ မီးဇာ ရင်သားလုံးလုံးအိအိလေးကို ဆိုက္ကားဟွန်းနှိပ်သလို အိကနဲ နှိပ်ချလိုက် ဆုပ်နယ်ချေမွလိုက်လုပ်လာသည်။
" ဗြစ်.. ပြွတ်.. ဖတ်.. ဖတ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. "
" အာ.. အာ.. အာ့.. အာ့.. "
ပြင်သစ်မလေးကိုယ်ခန္ဓာက ကပ္ပလီကြီးဆောင့်အားကြောင့် ရှေ့ဆီသို့ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဆောင့် ဆောင့် လှုပ်ရှားနေပြီး အင်မတန် ကောင်းနေသော သဘောနှင့် လျှာလေးဖြင့် နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဝိုက်လျက် ယက်ခါ ယက်ခါ ပါးစပ်ကလေး ဟထားရင်း တအားအား အော်နေပုံမှာ မီးဇာရင်ကို ပူလောင် လှိုက်မောလာစေသည်။ မီးဇာ၏ အသက်ရှုသံလေးမှာ မသိမသာလေး ပြင်းလာလေသည်။ ကျားမုဆိုးနှစ်ကောင်က သရည်တမြားမြားနှင့် အတင့်ရဲစွာ ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်လာကြရာ မီးဇာထမီလေးမှာ ပေါင်ရင်းနားသို့ပင် ပင့်တင်ရောက်ရှိလာလေသည်။
မီးဇာ ရင်တွေခုန်နေသည်။ သူတို့ပြောသော စကားအနက်အဓိပ္ပါယ်က မီးဇာနားသို့မဝင်တချက် ဝင်တချက်။ ကာမ မီးတောက်သည် မီးဇာကို လောင်မြိုက်စပြုပြီ။
" အဟင့်.. အင့်.. အင်း ဟင်း.. ဟင်း.. အင့်.. အဟင့်.. "
မီးဇာတကိုယ်လုံး မှော်ဝင်ကျောက်ဆစ်ရုပ်နှယ် စတင်လှုပ်ရှားလေသည်။ လက်ထဲမှ ခေါက်ထီးလေးက ထိုင်ခုံနောက်ကျောအနိမ့်ပိုင်းသို့ လိမ့်ကျလျှောဆင်းသွားသည်။ မီးဇာ အားလျှော့လိုက်သည်။ ဆိုဖာကျောကိုမှီရင်း တဟင့်ဟင့် ရှိုက်ငိုပစ်လိုက်မိတော့သည်။
ဂျိုးပြော မိုးပြောနှင့် တောင်စဉ်ရေမရ ဥပမာ ဥပမေယျတွေ လုပ်ကြံပြောလာခဲ့သော ရှေ့နေအတု(စစ်အောင်) နှင့် ဆရာဝန်အတု(ဟန်ဝင်း)တို့ ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးကြီးများ ကွာကျသွားကြလေသည်။
" အာ.. အ.. အ.. ဟ.. အဟ.. အဟင့်.. "
သူတို့၏ ကျွမ်းကျင်ထိရောက်သော အပွတ်အသပ် အဆုပ်အနယ်များကို မီးဇာ ရုန်းကန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့။ ပေါင်ကြားထဲသို့ လက်ထိုးနှိုက်ကာ စောက်ပတ်လေးကို လက်ညှိုးကြီးဖြင့် မွှေနှောက်ကလိခြင်းခံလိုက်ရသည်။
" အိုး.. အိုး.. "
« Reply #5 on: December 20, 2012, 03:40:07 PM »
မီးဇာ တွန့်ကနဲ ဖင်ကြီးကြွသွားပြီး ဟန်ဝင်းလက်ကို ပေါင်နှစ်ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းကြီး ညှပ်လိုက်မိသည်။ လက်မောင်းမာကျစ်ကျစ်ကြီးကို ပေါင်နှစ်လုံးက ညှပ်ဖိထားသော်လည်း လက်ညှိုးကြီးက အသစ်စက်စက် စောက်ပတ်လေးအထဲ၌ ကလိနေပြန်ရာ ဖင်ကြော ရင်ကြောကြီးများ စိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ ခံစားလိုက်ရပြီး စောက်ပတ်အတွင်းမှ အရည်လေးများ စို့ထွက်လာရလေ၏။
" ဟင့်.. အင်း.. ရှုး.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. "
မျက်စိအစုံကို ဇွတ်မှိတ်ထားမိသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆိုဖာနောက်ကျော ကျောမှီတန်းပေါ်တင်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကို စေ့လိုက် ကားလိုက် ဖင်ကြီးကြွလိုက် ပြန်ချလိုက်ဖြင့် မနေတတ်မထိုင်တတ်အောင် ခံစားနေရသည်။
မီးဇာ၏ အပေါ်အင်္ကျီလေးကို စစ်အောင်က ချွတ်လိုက်သလို ဟန်ဝင်းကလည်း မီးဇာဖင်အကြွ၌ ထမီလေးကို ဆတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်လေသည်။
ချွေးသီးလေးများ စို့နေသော မီးဇာမျက်နှာလေးက ဖမ်းဆုတ်မရသော လေဟာနယ်အတွင်း စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသူလို လွင့်မျောနေသည်။ တွယ်ရာမဲ့ မောဟိုက်နေသည်။ စစ်အောင်က သူ့ပုဆိုးနှင့် အင်္ကျီများကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ အသက်(၃၀)ကျော် ယောက်ျားတယောက်၏ အဖွံ့ဖြိုးဆုံးကာလ အထန်ဆုံးသောအရွယ် လီးကြီးမှာ ငါးရှဉ့်ကြီးတကောင်လိုပင်။ နီရဲသော ထိပ်ကြီးက ငွါးငွါးစွင့်စွင့်ကြီးပေါ်လာသည်။ စစ်အောင်က သူ့လီးကို ခပ်တင်းတင်းကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်၏။
ချက်ခြင်းပင် လီးကြီးက အကြောကြီးတွေ ထောင်လာသည်။ ဂွေးဥတွဲလွဲကြီးက အမွေးကျိုးတို့ကျဲတဲ နှင့် ခါရမ်းလှုပ်ရှားနေသည်။ စစ်အောင်က မီးဇာလက်ကလေးတဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့လီးကြီးပေါ်သို့ အုပ်တင်လိုက်သည်။ လီးကြီးက နွေးပူ နေသည်။
မီးဇာက သူမလက်ချောင်းလေးများကို ကုပ်ကွေးထား၏။ လက်ဆစ်လေးများဖြင့်သာ လီးကို ထိတွေ့မိကြသည်။
" ကိုင်လိုက်စမ်းပါ "
စစ်အောင်က အမိန့်ပေးသလိုလို အသံဆတ်ဆတ်နှင့်ပြော၏။ မီးဇာက မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီး လီး
ကြီးကို မရဲတရဲလေး ခပ်ဖွဖွဆုပ်ကိုင်လိုက်ရာ တကိုယ်လုံးဓါတ်လိုက်သလို ဖိန်းရှိန်းတုန်ခါသွားမိလေသည်။ လီးကို ကိုင်ထားသော မီးဇာလက်ကလေးများက တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာက ဆောင်းလေအဝှေ့ခံရသော နှင်းဆီပွင့်လွှာလေးများနှယ် တရွရွလှုပ်ရှားနေသည်။ မျက်ဝန်း၏ ရွှန်းစိုသော အကြည်ဓါတ်တို့က မှုံသီဝေဝါးနေကြပြီ။
လီးကို ကိုင်ထားသော အပျိုမလေး၏ လက်ချောင်းလေးများ မသိမသာတင်း.. တင်းလာသည်။ မာန်တင်းလာသော နတ်ဝင်သည်လို တကိုယ်လုံးတုန်ခါယိမ်းထိုးလာသည်။ စစ်အောင်က ကာမဓါတ်များကို လီးမှတဆင့် မီးဇာအသဲသို့တိုင်အောင် ပို့လွှတ်ပေးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီးဇာစောက်ပတ်လေးမှာ ပွစိပွစိဖြင့် တန်ပြန်လှုပ်ရှားလာကြသည်။
ဟန်ဝင်းကလည်း သည်လိုပွဲမျိုးကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်ဆင်နွှဲတတ်သူဖြစ်သည်။ ဇာနည်နွယ်၏ ဖွေးဥနူးညံ့နေသော ပေါင်တံကြီးနှစ်ဖက်ကို အသာအယာ ဘေးတဖက်စီသို့ ဆွဲကားပြစ်လိုက်၏။
စောက်မွေးနုနုလေးများက နီကျင်ကျင်နှင့် အဖုတ်လေးကအုံကြွဖောင်းကားတတ်လာသည်။ ဆီးစပ်ဖြူဖြူခုံးခုံးလေး အောက်တွင် နက်ရှိုင်းသော အကွဲကြောင်းလေးက ထင်းကနဲပေါ်လာသည်။
စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးထိပ်ပိုင်းဆီတွင်မူ ပြူတစ်စ ပန်းဖူးလေးထိပ်ကို ခပ်ဟဟလေးတွေ့နေရ၏။ ဟန်ဝင်းက အကြောစုရာ ဆုံရာ အစိလေးကို အလွတ်မပေးဘဲ လျှာဖျားလေးနှင့် ကုန်းပြီးကလိပေးလိုက်လေသည်။ နွေးပူသော လျှာကြီးက စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ပြွတ်ကနဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်နှင့် ပေါင်နှစ်ဖက်က ခလုတ်နှိပ်ခံလိုက်ရသလို ဘေးသို့ကားကနဲ ပြဲထွက်သွားပြီး ချက်ချင်းပြန်စေ့ကာ ဟန်ဝင်းခေါင်းကို ပေါင်နှစ်လုံးနှင့် ညှပ်ထားလိုက်၏။ အစိမ်း အရိုင်းလေးများကို ကြိမ်ဖန်များစွာ လေ့ကျုင့်ပေးလာပြီးဖြစ်သော ဟန်ဝင်းက မရုန်းမဖယ်။
သူ့ခေါင်းကို မီးဇာ၏ ပေါင်ကြား၌သာ ငြိမ်နေလိုက်ပြီး လျှာစောင်းကလေးဖြင့် ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ ထိုးသွင်းလျက် အဆက်မပြတ် ယက်ပေးလိုက်လေသည်။ ထိုအခါ စစ်အောင်လီးကြီးကိုကိုင်ထားသော မီးဇာလက်ကလေးများ တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဆုပ်ညှစ်ပြီး တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းနှင့် ထွန့်ထွန့်လူးသွားရှာလေ၏။
" အဟင့်.. အင့်.. ရှုး.. အား.. အာ.. ကျွတ် ကျွတ်.. "
စောက်စိလေးမှာ တင်းထောင်လာသည်။ စောက်ပတ်ထဲမှ အရေကြည်လေးများ ယိုစိမ့်ကျလာသည်။ ဟန်ဝင်းလက်နှစ်ဖက်က မီးဇာဖင်ကြီးများကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ မီးဇာ အောက်ပိုင်းတခုလုံး မကြုံစဖူးသော အရသာထူးကြောင့် သိမ့်သိမ့်ခါနေလေသည်။ မီးဇာမျက်စိကို တင်းတင်းမှိတ်ထားသည်။ စစ်အောင်က မီးဇာ၏ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို နှုတ်ခမ်းနီဆေးဆိုးပေးသလို အပြန်အလှန်ပွတ်ပေးလိုက်သည်။
" အို့.. "
မီးဇာမျက်နှာဆတ်ကနဲ ရှောင်ဖယ်ရင်း သူမပါးစပ်နားမှ လီးကြီးကို ခါထုတ်လိုက်သည်။ ရင်ဝယ် ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်းနှင့် မွှန်ထူနေသည်။ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေသို့ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းကို မိမိ ပြန်လည်စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေ၏။ စစ်အောင်က ခါထွက်သွားသော မီးဇာခေါငးလေးကို ညင်ညင်သာသာ ဆွဲကိုင်တည့်မတ်ပြီး ကြီးမားနီရဲနေသော လီးဒစ်ကြီးကို ပါးစပ်လေးအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
"အွန့်.. ဟွန့်.. အင်း.. အွန်း.. "
မီးဇာပါးစပ်အတွင်းသို့ မာတင်းပြောင်ချောနေသော ကိုစစ်အောင်လီးကြီးက တသွတ်သွတ် ဝင်ချီထွက်ချီပြုလျှက်ရှိရာ မီးဇာက လျှာဖြင့်အသာအယာလေး ကာထားရင်း ပါးစပ်ကို ခပ်စုစုလေး စုပေးထားလိုက်သည်။
" ပြစ်.. ပြွတ်.. ပြစ်.. ပြွတ်.. ပြစ်.. ပြွတ်.. "
" အွန်း.. အင်း.. အွန်း.. အင်း.. "
« Reply #6 on: December 20, 2012, 10:19:37 PM »
စစ်အောင်၏ လမွှေးကြမ်းကြီးများက မီးဇာ၏ နှာတံထိပ်လေးကို ပြေးပြေးအုပ်မိနေပြီး နီစွေးလှပသော နှုတ်ခမ်းလေးအစုံမှာ လမွှေးအုံကြီးကြား၌ နစ်မြှုပ်လိုက် ဝေးကွာလိုက်ဖြင့်.. ။
" ပြစ်.. ပြွတ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. အွန့်.. အွန်း.. "
စစ်အောင်လီးကို စုပ်ပေးနေရသော မီးဇာစောက်ပတ်လေးကို ဟန်ဝင်းက အောက်တွင် မြိန်ယှက်စွာယက်ပေးနေပြန်ပါသည်။ ဆိုဖာပေါ်တွင် ထိုင်လျက်ရှိသော မီးဇာ၏ မျက်နှာကို စစ်အောင်က ခွလျက်ရပ်ရင်း အစုပ်ခံနေခြင်းဖြစ်ပြီး ကြမ်းပြင်၌ ဒူးထောက်ထားသော ဟန်ဝင်းက မီးဇာစောက်ပတ်ကို ယက်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
ခံစားမှုနှစ်မျိုးကို တပြိုင်နက်ခံစားတွေ့ကြုံနေရသော မီးဇာ၏ အသိအမှတ်သညာများ တကယ်ပင် ရှုပ်ထွေးဝေဝါးသွားကာ မှုံသီလွင့်ပါးနေသည်။
" အောက်ဆင်းလိုက်ပါလား.. ဇာနည်နွယ် "
အသံက မမာ မပျော့ အပေးနှင့်အယူသင့်တင့်မျှတနေပြီးသား ရှယ်ယာသမားများလေသံ။ မီးဇာပေါင်ကြားမှ ဟန်ဝင်းက ခေါင်းကို မော့ပြီး ပြောင်တင်းနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို အာသာငမ်းငမ်းကြည့်ရင်းပြောလိုက်သည်။ မီးဇာစောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း လိုးချင်စရာ ကောင်းလှသည်။ နှုတ်ခမ်းသသာထူထူကြီးများနှင့် စောက်စိလေးက ပြူးထွက် တင်းမာနေပြီဖြစ်သည်။
စောက်ပတ်အနေအထားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်ပင် ဒီကောင်မလေးခံချင်နေမှန်း အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူတို့နှစ်ဦးလုံးသိကြသည်။
မီးဇာက ကော်ဇောကြမ်းကြီးခင်းထားသော ကြမ်းပြင်ဝယ် ရှက်ရွံ့စွာ မျက်နှာလေးကို ငုံ့ရင်း လှဲအိပ်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါ စစ်အောင်က မီးဇာမျက်နှာပေါ်သို့ခွရပ်ပြီး လီးကြီးကို ပါးစပ်အတွင်းထိုးထည့်လိုက်ပြန်သည်။ မီးဇာက စစ်အောင်ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်ကို အားပြုကိုင်တွယ်ရင်း စုပ်ပေးနေရသည်။
ဟန်ဝင်းကတော့ အစွမ်းကုန် တောင်နေသူ့လီးကြီးကို ဂွင်းတိုက်ရင်း စောက်ပတ်လေးကို အားရပါးရ လိုးရန် ဟန်ပြင်လိုက်သည်။
မီးဇာ ခြေနှစ်ချောင်းကို အပေါ်သို့မလိုက်သည်။ ခြေသလုံးမွှေးသန်သန် မဲမဲလေးများကို လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်မိသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက ခပ်အာအာပြဲလျှက် ဖူးယောက်လာသလို တင်းမောက်လာသည်။
ထိုအခါ ဟန်ဝင်းက စောက်ပတ် အပေါက်ဝသို့ လီးထိပ်ကို "သွတ်"လိုက်ခါ "ပြွတ်"ကနဲ ဒစ်မြှုပ်ရုံ နှစ်ချလိုက်ပြီး "ဗြစ်"ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
" ပြွတ်.. ဗြစ် "
" အီး.. အင့်.. "
မီးဇာ မချိမဆန့် သိမ့်သိမ့်ခါသွားသည်။ နင့်ကနဲ အီစိမ့်သွားသော အရသာက နှစ်စက္ကန့်လောက်မှာပဲ ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ငိုချင်သွားသည်။
ပေါင်နှစ်ဖက်က ဟန်ဝင်းပေါင်ပေါ်တွင် ကားလျက် "ပေး"ထားရသောကြောင့် ကျောလေး ကြမ်းပြင်နှင့်လွတ်အောင် "ကော့"ပြစ်လိုက်မိသည်။
စစ်အောင်လီး နွေးနွေးကြီးကိုလဲ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးနေရသေးရာ မကျေမနပ်ဖြင့် မျက်ရည်လေးပင် လည်အောင် ဒေါသထွက်သွားမိလေသည်။
စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းမှာလဲ ဟိုဟတ်သည်ဟတ်နှင့် လိုက်ဟတ်နေသလို အပြဲ.. အပြဲလေးဖြစ်သွားလေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်သွားရခြင်းကိုပင် ဟန်ဝင်းက အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်လေသည်။
ပေါင်နှစ်လုံးကို ကိုးဆယ်ဒီဂရီပင့်တင်လိုက်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် အနေအထားနှင့် လီးကိုတေ့လိုက်သည်။ ပူနွေးသော လီးထိပ်ကြီးအထိအတွေ့က ဖင်ကြီးကို စိမ့်ကနဲ ကြက်သီးဖုကကလေးများ ထသွားစေသည်။ လီးထိပ်က စောက်ပတ်အဝကို တေ့မိသည်နှင့် ဖင်တပိုင်းလုံးက ဖျင်းကနဲဖြစ်သွားကာ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်း တင်းကနဲ ကျစ်မာသွားပြီး ရှုံ့တင်းနေ၏။
ဟန်ဝင်းက စောက်စိထိပ်လေးကို တံထွေးဆွတ်ပြီးနောက် လက်ညှိုးထိပ်ကြီးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက်မှ လီးကို ဖိသွင်းချလိုက်လေတော့သည်။
" ဗြစ်.. ဗြွတ်.. ဗြွတ် "
" အူး..... "
မီးဇာပါးစပ်ထဲမှ စစ်အောင်လီးကြီးကို ယောင်ပြီး မကိုက်မိစေရန် မနဲကြီးသတိထားလိုက်ရလေသည်။ စောက်ခေါင်းလေးအတွင်းသို့ ဒလကြမ်းကြီးတိုးဝင်လာသော ဟန်ဝင်းလီးကြီးမှာ လုံးပတ်ထွားကြိုင်းလွန်းလေရကား မီးဇာ တကိုယ်လုံး သွက်သွက်ခါထွန့်တက်သွားရလေသည်။
« Reply #7 on: December 20, 2012, 11:20:16 PM »
" ဟေ့ကောင်.. ဖြေး ဖြေး "
ဟန်ဝင်းက အားနှင့် မာန်နှင့် ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်ကို စစ်အောင်က စိုးရိမ်တကြီးနှင့် လှည့်ပြီး တိုးတိုးပြော၏။
" ဆော်လေးက ကြပ်တယ်ကွ.. ဟီး "
" လီးမှဘဲ.. အပျိုပါဆိုမှ ကြပ်မှာပေါ့ "
" ဖြေးဖြေးလုပ်ကြပါ အကိုတို့ရယ်.. နာလွန်းလို့ပါ.. "
" ညီမက.. အပျိုဆိုတော့ ကြပ်လို့ပါ.. နောက်တော့လဲ ကျယ်ပြီးကောင်းသွားမှာပါ.. ညီမရဲ့ "
စစ်အောင်က ဖူးတင်းနူးညံ့နေသော နို့လေးနှစ်လုံးကို သူ့ဂွေးဥကြီးဖြင့် မသိမသာ ပွတ်သပ်ပေးရင်း ချော့လိုက်၏။
" အား.. ရှုး.. အင်း.. အင်း.. ကြပ်..တယ်.. အား... "
မီးဇာလူမမာညည်းသလို သဲ့သဲ့ဖျင်းဖျင်းလေး ညီးတွား၏။
" ဟန်ဝင်း ဖြေးဖြေး.. လုပ်ပါဆို "
" အင်.. အင်း ပါကွ.. ဟီး.. ကောင်းတယ်ကွာ "
" ကောင်းတိုင်း စွတ်ဆောင့်မနေနဲ့.. ဂန့်နေအုံးမယ် "
" အဲ့လောက်တောင်လဲ မဖြစ်ပါဘူးကွာ "
စစ်အောင်က မီးဇာနာကျင်သမျှကို ထိန်းချုပ်ကာ ပွတ်သပ်ပေးရင်း ဟန်ဝင်းကို သတိပေး၏။
ဟန်ဝင်းကလဲ လိုးနည်းကျွမ်းကျင်သူပီပီ ခြေနှစ်ဖက်ကို မုံ့ကျိုးလိမ်သဏ္ဌာန်လိမ်ပြီးဆောင့်သည်။
" ပြွတ်.. စွတ်.. ပြွတ်.. စွတ်.. ဖတ်.. ဖတ်.. "
" အင့်.. အင့်.. အင့်.. အိုး.. အိုး.. "
" နာသေးလားဟင်.. ညီမ "
" ရှုး.. အား.. နဲ..နဲ အား.. အား.. အာ.. ဖြေး ဖြေး.. ဆောင့်ပါရှုင်.. အထဲမှာ အရမ်းကျပ်တာပဲ.. "
မီးဇာက မျက်ရည် ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျကာ ငိုရင်းသဲ့သဲ့ယဲ့ယဲ့လေး ပြောရှာသည်။
" ဖွတ်.. ပြွတ်.. စွတ်.. ပြွတ်.. ပြွတ်.. "
လိုးဆောင့်သံသည် နရည်မှန်လာ၏။ စည်းချက်ကျလာပြီး မီးဇာ၏ တအင့်အင့် အသံလေးကပါ
အခန်းထဲ၌ ပြည့်ဝသော လိုးပွဲလေးကို အားဖြည့်နေပေသည်။ ဟန်ဝင်း အကြိတ်အနယ်ဆောင့်သမျှ
စစ်အောင်က နို့နယ်ပေးလိုက် ဆီးခုံလေးကိုပွတ်သပ်ပေးလိုက်ဖြင့် နည်းမျိုးစုံ
ဖြေသိမ့်ပေးနေရပေသည်။ ဟန်ဝင်း၏ ကြီးမားသော လီးကြီးက ဖြူဝင်းဖောင်းကားနေသော မီးဇာ
စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ အိကနဲ အိကနဲ ဝင်သွားသည်ကို ကြည့်ရင်း စစ်အောင်မှာလဲ လိုးချင်စိတ်များ
" အစ်ကိုရော.. လိုး..အုံးမှာလား.. ဟင်.. "
" အင်းပေါ့.. ဘာလဲ ညီမက အစ်ကို့ကို မခံချင်လို့လား "
" မ..မ.. မဟုတ်ပါဘူး.. ဖြေး ဖြေး.. လုပ်လို့ပြောမလို့ပါ.. "
« Reply #8 on: December 21, 2012, 12:19:50 PM »
" အို..အစ်ကို့အလှည့်ကျရင်.. စိတ်ချ.. မနာစေရဘူး "
ပူလာသည်။ ထူလာသည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ချက်များက မီးဇာစောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ မီးစနှင့် ထိုးလိုက်သလို ပူကနဲ ပူကနဲ သုံးလေးကြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက် စောက်ပတ်ကို တင်းကနဲ တင်းကနဲ ညှစ်လိုက်မိသည်။
" ဘွပ်.. ဘွပ်.. ပြွတ်.. စွတ်.. စွတ်.. စွိ.. စွတ်.. "
" အိုး.. အိုး.. အို.. အား.. ထွက်.. ထွက်.ကုန်ပြီ... "
အပျိုရိုင်းမလေး၏ ဝတ်ရည်အိုးလေး ကွဲသွားသည်။ ပျားပတုံးကောင်ကြီး၏ ကြမ်းတမ်းစွာသောက်သုံးမှုကို ခံလိုက်ရသော မီးဇာတကိုယ်လုံး နှုံးချိကာသွားရသည်။ ဟန်ဝင်းကမူ သုက်ရည်အလူးလူးနှင့် သူ့လီးကြီးကို "ဗြွတ်"ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဟန်ဝင်းလီးကြီးက သိပ်ကျေနပ်သေးဟန်မတူဘဲ ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ မာန်ဖီနေဆဲရှိသေးသည်။ လီးတချောင်းလုံး မီးဇာစောက်ရည်များဖြင့် ပေသလူးနေကာ ပြောင်လက်တင်းမာနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
ကောင်းသည်.. အတော်လေးကို ခံလို့ကောင်းသည်။ စောက်ပတ်တခုလုံး ကျိမ်းစပ်ပြီး ကျန်ရစ်သည်။ စောက်ခေါင်းအတွင်း၌မူ ခံချင်စိတ်က ကျန်ရစ်နေဆဲ.. ။
" အစ်ကို.. လုပ်အုံးမယ်ဆို.. "
မီးဇာ.. စစ်အောင်ကို မော့ကြည့်ရင်း တိုးတိုးမေးသည်။
" ဟိုကောင်.. ထပ်ကိုင်အုံးမလား.. လို့ "
" အို.. အစ်ကိုလုပ်အုံးလေ.. နောက်တခါမှ သူတခါလုပ်ချင်ပစေပေါ့.. တယောက်တလှည့်စီလုပ်ပေါ့.. "
မီးဇာသိပ်ကို ရဲတင်းလာသည်။ လီးယဉ်သွားပြီမို့ ကြောက်စရာဟု မီးဇာမထင်တော့။ အပေးကောင်း အယူကောင်း လိုးပွဲလေးမျိုးကို မီးဇာခံစားကြည့်ချင်ပါသည်။
မီးဇာဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ စစ်အောင့်လီးကြီးက အချိန်အတန်ကြာနူးနှပ်ထားပြီးသားမို့ လိုးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသလို လိုးချင်စိတ်မှာလည်း အပြင်းထန်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့နေသည်။
" ညီမ.. ပေါင်တဖက် လှဲပြီးတဖက် ထောင်ထား "
စစ်အောင်အလိုကျ စောက်ပတ်ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲပြီး ထောင်ပေးလိုက်သည်။ စစ်အောင်လီးကြီးက တွင်းပေါက်တွေ့သော မြွေငန်းကြီးကဲ့သို့ စောက်ပတ်အဝသို့ တရွှေ့ရွှေ့တိုးကပ်လိုက်လေသည်။
ဟန်ဝင်းက ခပ်စောင်းစောင်းဖြစ်နေသော မီးဇာ၏ ခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ်သို့ တပိုင်းမှောက်အိပ်ကာ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ စုပ်ပေးလိုက်လေသည်။ နီရဲသော နို့သီးခေါင်းလေးများက ထောင်ထလာကြသည်။
မီးဇာဝမ်းဗိုက်သားလေး တလှပ်လှပ်နှင့် လှိုင်းထနေရှာသည်။ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကျလျှက်ရှိ၏။ စောက်ပတ်အနီးတဝိုက်မှာ ရဲတွတ်နေသည်။
စောက်မွှေးလေးများတွင် သုက်ရည်များပေကျံကာ တချို့မှာ ဆီးခုံတွင်ကပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စစ်အောင်က စောက်ပတ်အဝကို လီးသွင်းလိုက်ပြီး လက်နှင့်ကိုင်ကာ စက်ဝိုင်းသဏ္ဌာန်လှည့်မွှေပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ လက်ဝဲ လက်ျာ အထက်အောက် ရွဲ့စောင်းလျှက် စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ တဖျစ်ဖျစ်မြည်ရင်း အုံကြွ ဖောင်းကားလာလေ၏။
" ဗြစ်.. ပြစ် ပြစ်.. ဗစ်.. ပြစ်.. ပြစ် ပြစ်.. ဗစ်.. "
" ဟင့်.. အင်း.. အား.. ဟား.. အင်း.. ကျွတ် ကျွတ်.. "
မီးဇာ၏ လက်ချောင်းလေးများ ကုတ်ကွေးတွန့်လိမ်ကာ ခြေတဖက်မြှောက်ထားသည့်ကြားမှပင် သူမ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ဆားထိသော တီကောင်ကဲ့သို့ ထွန့်ထွန့်လူးသွားရှာလေသည်။ စစ်အောင်က စောက်ပတ်အတွင်း ဒုတ်တချောင်းကဲ့သို့ သန်မာကြီးထွားလှသော လီးကြီးကို ဒုတိယအကြိမ် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့တဖန် ကိုင်သွင်းပြီး လှည့်မွှေပြန်သည်။
အတွင်းသားရဲရဲလေးများ ပေါ်ထွက်သည်အထိ လီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက် လိမ်သွင်းပြီး လှည့်မွှေလိုက်ဖြင့် မီးဇာ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှာ အရေများ ရွှဲအိုင်ထွက်လာပြီး ညောင်စီးကျအောင် စိတ်ကြိုက် မွှေနှောက်ကလိပေးလိုက်လေရာ မီးဇာမှာ ပူစပ် ပူလောင်လေးဖြင့် ဆီးအိမ်အတွင်းမှ ဆီးသွားချင်သလိုလို.. စောက်ရည်များပဲ ပန်းထုတ်မိတော့မလိုလိုနှင့် ခံရခက်သော ကောင်းခြင်းမျိုးလေးကို တသသဖြစ်အောင် ခံစားမိလိုက်လေ၏။
« Reply #9 on: December 21, 2012, 12:22:01 PM »
ဟန်ဝင်းကလည်း ပေါင်ဒါနံ့တသင်းသင်းလေးပျံ့သင်းမွှေးကြူနေသော မီးဇာကိုယ်လုံးလေးကို တရစပ်နမ်းရှိုက်ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်ရာ မီးဇာမှာ နှစ်ယောက်မဆိုထားနှင့် တယောက်ကိုပင် လုံးဝအလိုးခံဘူးသူ မဟုတ်လေရကား ချွေးသီးလေးများစို့အောင်ပင် ခံ၍ ကောင်းနေမိလေသည်။
စစ်အောင်အတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုများကို အချိန်ယူနှိုးဆွမွှေနှောက်၍ လိုးချင်သောစိတ်မှာ ထိန်းမရအောင် တုန်ခါလာသောအခါ သူ၏လီးကြီးကို မီးဇာလေး၏ စောက်ပတ်အတွင်းသို့ အသာအယာနှိမ့်ပြီး လိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။
" ပြွတ်.. ပြီပြိပြိ.. ပြွတ် "
" အိုး.. အ.. ဟင့်.. အင်း.. ဟင်း ဟင်း.. "
တစောင်းလေးလှဲအိပ်နေရာမှ မီးဇာခြေထောက်လေးမှာ ဒကောက်ခွက်မှ ဆတ်ကနဲ ကွေးသွားသည်။ ကြီးမားလုံးကျစ်နေသော ဂွေးဥကြီးက မီးဇာအတွင်းပေါင်တခြမ်းပေါ်တွင် ဒရွတ်တိုက် ပွတ်ရင်း စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းနှင့် လုံးဝဖိကပ်မိသွားသည်အထိ ဆောင့်ချလိုက်လေတော့သည်။
" ဗစ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. "
" အား.. ရှီး.. အား ရှီး.. အား.. အမလေး.. အစ်ကိုရယ်.. အစ်ကို့ဟာကြီးကလည်း.. "
" အစ်ကို့ဟာကြီးကလည်း "ဟု မီးဇာယောင်ပြီးပြောရင်း လက်တဖက်က ကြပ်သိပ်စွာ လိုးဝင်နေသော သူမစောက်ပတ်အဝကို လက်ကလေးနှင့် စမ်းလိုက်မိလေသည်။ မီးဇာ အတွင်းပေါင်သားလေးများ ဆတ်ဆတ်တုံနေရှာသည်။ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သော လက်ချောင်းလေးများ ကြားမှ လီးမာမာကြီးက ခပ်တင်းတင်းလေး အဆုံးအထိ လိုးဝင်သွားပြန်သည်။
" ဗြစ်.. ပြွတ်.. ဟင့်.. ဟင့်.. ဘွတ် "
" အင်း " မီးဇာက မေးကလေးငေါ့ပြီး အံလေးတင်းတင်းကြိတ်ကာ အင်း ရှည်လေးညီးရင်း တွန့်တက်သွားသည်။ စောက်ပတ်လေးတခြမ်းဆီ နှိပ်ဖိပြီး ဖိချလိုက်မိလေသည်။ ထိုအခါ အပေါက်ကျဉ်းကျဉ်လေးထဲသို့ ခပ်ကြပ်ကြပ်ထိုးသွင်းနေသော စစ်အောင်၏ အကြောပေါင်းစုံ ထောင်နေသည့် လီးကြီးမှ အမွေးကြမ်းကြီးများက ဖြူလွှသွယ်ပျောင်းသော မီးဇာ၏ လက်သူကြွယ်မှ ခုနှစ်လုံးတန်း ပတ္တမြားကျောက်ရဲရဲလေးများ စီထားသော လက်စွပ်လေးကို ဖုံးအုပ်မိသွားလေသည်။
လှပဖြူနုသော မီးဇာလက်ချောင်းလေးများက လီးအဝင်အထွက်ကို ပို၍ကျပ်တည်းအောင် ထိန်းပေးသလိုကြီးဖြစ်နေပြန်ရာ စစ်အောင်မှာ လိုးအားပိုကောင်းသွားပြန်၏။ သို့သော် အဆုံးအထိဖိချလိုက်သော စစ်အောင်လီးက လက်နှစ်လုံးခန့်အကျန်တွင် မီးဇာလက်ကလေးနှင့် ထောက်ကာ ရှေ့ဆက်မတိုးသာဘဲ မာကျောသော လက်ဆစ်ကလေးများနှင့် ဆီးခုံ ထောက်မိပြီး ရပ်တန့်သွားလေ၏။
" ညီမ.. လက် ဖယ်လိုက်ပါလား.. ဟင် "
" အာ.. အခုတောင်.. အတော်နာနေတာ.. အဆုံးအထိဆို ကျမခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးရှင့်.. "
မီးဇာက အံလေးကြိတ် မျက်စိလေးမှိတ်ရင်း ငြင်း၏။ ဟန်ဝင်းက ခေါင်းထောင်ကြည့်ရင်း စစ်အောင်ကို မျက်စိမှိတ်ပြလိုက်သည်။ နို့လေးနှစ်လုံးမှာ အလတ်စားဟင်းပန်းကန်လုံးလေးတစ်လုံးမှောက်ထားသလို အိခြင်းတွဲခြင်းမရှိပဲ ပကတိ မာတင်းလျှက် နို့သီးခေါင်းလေးများ တင်းထောင်နေလေသည်။
ဟန်ဝင်းက မီးဇာရင်သားနုနုလေးများအပေါ်သို့ ကြမ်းရှရှသူ့လက်အစုံကို အုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ်နယ်ဖတ်ရင်း အောက်ခြေမှ ပင့်တင်စုကိုင်၍ ညှစ်လိုက်ပြန်သည်။
" အာ.. အာ.. နာတယ်.. ရှင်.. "
မီးဇာက ဟန်ဝင်းလက်အပေါ်မှ အုပ်ကိုင်ရင်း အော်လိုက်ရှာလေသည်။ မီးဇာ၏ လက်တဖက်က နို့အုံလေးများတွင်လည်းကောင်း၊ ၄င်းစောက်ဖုတ်လေးဆီ၌လည်းကောင်း ဗျာများနေရှာ၏။
" ဇွတ်.. အိ.. ဘွတ်.. ဘွတ်.. "
" အား.. သေပါပြီ.. ရှင်.. "
စစ်အောင် မီးဇာကိုင်ထားသော လီးနှင့်စောက်ပတ်ကြားမှ လက်ကလေးကို ဆတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်ရင်း ဖိချလိုးထည့်လိုက်ရာ စောက်ခေါင်းနံရံကြွက်သားများနှင့် ဖိကြိတ်မိသွားသော လီးထိပ်ကြီးသည် သားအိမ်ခေါင်း "ကွမ်းသီးလုံး"လေးအထိ "ဒုတ်"ကနဲ ဆောင့်ဝင် သွားလေ၏။ အောင့်ကျင်သော ဝေဒနာသည် ဖင်တခုလုံးကို ဇတ်ဇတ် ဇတ်ဇတ်နှင့်ခါသွားစေသည်။ မျက်ရည်များဝေ့ဝဲလာကာ စောင်းထားသော မျက်လုံးအိမ်ထောင့်မှ မျက်ရည်ပုလဲများစီးကျလာလေသည်။
" ပြွတ်.. သွတ်.. ပြွတ်သွတ်.. ပြွတ်သွတ်.. "
စစ်အောင်က ပူပူလောလော အချိန်လေးကို ထိရောက်စွာ အသုံးချလိုက်သည်။ လီးကြီးကို ခပ်သွက်သွက်လေးဆွဲမတင်လိုက်ရာ စောက်ဖုတ်လေး ဆူကြွပြီးပါလာသည်။ တဖန် ဒစ်ကျွံခါနီး အထိ ပြန်လိုးသွင်းလိုက်၏။ လီးချောင်းတချောင်းလုံးတလျှောက် ဖုထစ်ဖောင်းကြွနေသော အကြောမာမာကြီးများက စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကို ပွတ်တိုက်တိုးဝင်သွားပြန်ရာ နှုတ်ခမ်းသားများ အတွင်းသို့လိပ်ဝင်သွားပြန်၏။
" ပြွတ်သွတ်.. ပြွတ်သွတ်.. ပြွတ်စွတ်.. "
" အင့်.. အင့်.. ဟင်.. အင့်.. ဟင်း.. "
မီးဇာ လည်ပင်းကြောလေးများထောင်လာသည်အထိ အသက်ကိုအောင့်ကာ တင်းခံနေရရှာသည်။
ပါးစပ်မှပွင့်အန်၍ အော်မြည်ညီးညူခြင်းမပြုနိုင်တော့ပဲ လည်ချောင်းထဲမှသာ "အင့်.. ဟင့်"ဟုသော အသံခပ်အစ်အစ်လေးထွက်လာနေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆက်မပြတ် မနှေးမမြန်လေး လိုးရင်းမှ စစ်အောင်လီးကြီးမှာ တဖြေးဖြေးမာသထက်မာ တောင်လာရင်း နောက်ဆုံး သံချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကဲ့သို့ လုံးဝမာကျစ်တောင့်တင်းသွားပြီး ဇတ်ကနဲ ဇတ်ကနဲ ဓါတ်လိုက်သလို တုန်ခါသွားလေတော့၏။
မီးဇာခမျာမှာလည်း ကိုစစ်အောင်အား ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်ဟု ခပ်စောင်းစောင်းလေးကြည့်မိရာမှ အံသွားကြီးများ တင်းနေအောင် ကြိတ်ရင်း ဒလကြမ်းကြီးဆောင့်သွင်းခံလိုက်ရပြီး ဆီးခုံလေးမှ စောက်မွေးလေးများနှင့် လမွေးကြမ်းကြီးများ ပွတ်ကြိပ်ခြင်းအသံကို သုံးလေးချက် ဗြိကနဲ ဗြိကနဲကြားလိုက်ရပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ ရှိန်းရှိန်းပူပူလေးဖြစ်ခါ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်လိုက်မိလေသည်။
ကာမရာဂ၏ အမြင့်ဆုံးအချိန်တွင် လိင်ပစ္စည်းများ အကျောအမာဆုံးဖြစ်လေရကား..
" ဘွတ်.. စွတ်.. ဘွတ်.. ပြွတ်.. ဘွတ်.. စွိ.. " ဆိုသော အရေရွှဲနေသည့် အသံများနှင့်အတူ စောက်ပတ်နှင့်လီးမှာ သံမဏိ သံထည်ကြီးများပမာ ဖြောင်းကနဲ ဖြောင်းကနဲ အရှိန်ပြင်းစွာ ရိုက်ခတ်မိကြလေ၏။
အကယ်၍သာ စင်စစ် မီးပွင့်တတ်သော ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါက ကြိမ်ဖန်များစွာ ပွတ်တိုက်ခြင်း ဆောင့် ဖိခြင်းတို့ကြောင့် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်စေနိုင်အောင်ပင် ပြင်းထန်ကြလေသည်။
စစ်အောင် ကိုင်မြှောက်ထားသော ခြေတဖက်ကို မီးဇာက ခပ်ရုန်းရုန်းလေး ဆောင့်လိုက်မှ စစ်အောင်က လွှတ်ပေးလိုက်ရာ ပက်လက်ကလေးငြိမ်ကျသွားလေသည်။
ရိုးစင်းသန့်စင်သော မိန်းကလေးဆီမှ ကာမကို နူးနပ်အရယူလိုက်ကြသော စစ်အောင်နှင့် ဟန်ဝင်းတို့အား ရှေ့နေနှင့်ဆရာဝန်အဖြစ်သိထားသော မီးဇာကမူ ချစ်သူ နောင်လတ်အတွက် ပက်ပက်စက်စက် ရက်ရက်ရောရောကြီး လာဘ်ထိုးလိုက်ရခြင်းအတွက် ကျေနပ်နေသလိုလို (သို့မဟုတ်) တကြိမ်တခါမျှမခံစားဖူးသော ကာမစည်းစိမ်ကြီးကို အပြည့်အဝ နှစ်ချီနှစ်လား ခံစားလိုက်ရသဖြင့် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စွာခံစားရသလိုလို.. မီးဇာမျက်နှာလေးက ပြုံး.. မလိုလို။
မနက်ဖြန် နောင်လတ်အမှု ရုံးတင်မည်။ ထိုအသိတခုကပဲ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသည်။
နောင်လတ်ရည်းစား ဇာနည်နွယ်တစ်ယောက် မနက်ကတည်းက ရှေ့နေဦးထွန်းကျော်၏ တပည့်စစ်အောင်နှင့်အတူ မြို့ထဲထွက်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်၏။ တွေ့စကတော့ "အော်.. သူလဲ နောင်လတ်အတွက် တဖက်တလမ်းက လှုပ်ရှားနေတယ်ထင်ပါရဲ့.." ဟု သာမန်မျှသာ တွေးလိုက်သည်။
ညနေပိုင်း(၃)နာရီလောက်အထိ သူတို့နှစ်ဦး ပေါ်မလာသောအခါ "ညိုမီ"စိတ်ပူသွားသည်။ တောင်တောင်မြောက်မြောက် အတွေးများလည်း ဝင်လာသည်။
ယောင်းမလောင်းအတွက် သောကသည် အလုံးအရင်းနှင့် ရင်ကို ပူဆွေးလောင်မြိုက်လာစေသည်။
ကောင်မလေးက (၁၈)နှစ်သာ ရောက်လာသည် ယောက်ျားတကာနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံဖူးသည်မဟုတ်။ အတွေ့အထိက ဘာဆိုဘာမှ မရှိ။ ညိုမီ တက္ကသိုလ်ရောက်သည် အထိ မှည့်တပေါက် အစွန်းအထင်းမရှိသော်လည်း ကျား.. အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသည်။ ကျားဆိုသည်က အသားစိမ်းကို အာဟာရအဖြစ်မှီဝဲတတ်သော တွားသွားသတ္တဝါစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေထဲ၌ ကျားသည် ရက်စက်မှု ကမ်းကုန်သော သတ္တဝါတမျိုးလည်းဖြစ်သည်။ အသေးဆုံးယုန်သူငယ်မှ အကြီးဆုံးဆင်အထိ ကုတ်ဖဲ့ကိုက်ဖြတ်စားသောက်ရန် အမြဲအာသီသ ကြီးမားသူလဲဖြစ်၏။ တောထဲမှ ကျားများကို ညိုမီ ရင်ဆိုင်မတွေ့ဘူးသော်လည်း မြို့လည်ခေါင်မှ ကျားများကို တောထဲမှ ကျားများထက် ကြောက်စရာကောင်းသူများဟု ညိုမီနားလည်ထား၏။ ယခု မီးဇာတွဲသွားသော စစ်အောင်သည် ဆယ်တန်းကိုပင် မအောင်သေးဘဲ သူ့ကိုယ်သူ ရှေ့နေလိုလို နောက်နေလိုလို ဖိန့်လုံးများနှင့် လင်ရှိမယားလဲဖြုတ်.. တခုလပ်တလင်ကွာ ခလေးမအေပင် ချမ်းသာမပေးသော ဝံပုလွေနှင့် ကိုးတောင်ကျားစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဟန်ဝင်းကိုတော့ ညိုမီမြင်ဖူးသည်။ အဘိုးကြီးက အသက်(၅၀)ကျော်ဖြစ်သော်လည်း သန်မာဖျတ်လတ်လျှက် နှစ်လိုဖွယ် အပြုံးဖြင့် လူနာများကို ဆက်ဆံတတ်သည်။ ဒေါက်တာဟန်ဝင်းမျက်နှာကို မြင်လိုက်ရသည်နှင့် လူနာ၏ရောဂါတဝက်လျော့သွားစမြဲ။ ဒေါက်တာကတော် အန်တီချစ်ကလည်း ဒေါက်တာကဲ့သို့ပင် သဘောကောင်း၊ သိက္ခာပြည့်ဝပြီး ဖြူဖြူခဲခဲကြီးနှင့် အမြဲသန့်စင်စွာ ပြုံးရယ်နေတတ်သူဖြစ်သည်။ ခက်သည်က မီးဇာဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိခြင်းပင်။ တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်လျှက် ညိုမီအိမ်မှ ကသုတ်ကရက် ထွက်လာသောအခါ ညနေ(၃း၁၅)နာရီ။
« Reply #11 on: December 22, 2012, 11:52:03 AM »
မိုးကဝုန်းကနဲ သွန်သလို ရွာချလိုက်သည်။ ရပ်ကွက်အတွင်း အလုပ်ပြန် ညဆိုင်းသမားများမှ အပ ရှင်းလင်းနေသည်။
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဖြောင်းကနဲ လျှပ်စီးလက်လိုက်သော အလင်းရောင်သည် ညိုမီ့အသည်းကို ငယ်သွားစေသည်။ ဖိုးတွမ်တီးစစ်အောင် စတည်းချတတ်သောတိုက်သစ်တလုံးကိုတော့ ညိုမီသိထားသည်။ ထိုတိုက်သို့ရောက်သွားသော မိန်းမပျိုလေးတိုင်း အမဲဖျက်သလို စစ်အောင် ဒဏ်ကို ခံရပြီးမှ မျက်ရည်စက်လက်နှင့် ပြန်ရသည်ချည်းဖြစ်၏။
မိုးက သည်းသည်းထန်ထန်ရွာသည်။ ဆောင်းထားသော ခေါက်ထီးလေးမှပင် ယိုစီးကျလောက်အောင် တမုန်းရွာသည်။ ရေမြောင်းများ အဟုန်ပြင်းစွာ စီးမျောနေ၏။ ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာမျိုးများလားကွယ်။
" ဟယ်.. မမညိုမီ.. "
အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းတွင် မီးဇာနှင့် စစ်အောင်အပါအဝင် အခြားထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် ယောက်ျားတယောက်ကိုပါ တွေ့ရ၏။
" ငါ.. နင့်ကို လာခေါ်တာ.. ဇာနည်နွယ်.. "
" ဝင်ပါအုံးလား.. မိုးတွေသိပ်ရွာနေတယ်လေ "
စစ်အောင်ဘေးက အကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ညိုမီသဘောမကျချေ။ နီရဲဝေဝါးစွာ အငမ်းမရအကြည့်။ သူတို့ပုံစံများက ဘောလုံးပွဲမှ ပြန်လာသူများနှယ် ဆံပင်များ ချွေးစိုနေသည်။ မျက်နှာတွေ နွမ်းဖတ်နေသည်။ ညိုမီ့ရင်များ တဒိန်းဒိန်း ခုန်သွားသည်။
" ဝင်ပါအုံး မမညိုမီ.. ဒါ.. ဒေါက်တာဟန်ဝင်းလေ.. "
" ဘာ.. ဘယ်ကအကောင်လဲ.. ဒေါက်တာဟန်ဝင်း.. "
စစ်အောင် မျက်နှာကွက်ကနဲ ပျက်သွားသည်။ မီးဇာတယောက် ကျားခံတွင်းထဲ ရောက်နေကြောင်း ညိုမီသိလိုက်ရလေပြီ။ စိုင်ကော်၍ ခြုံပေါ်ရောက်သည်ဆိုသောစကား၊ ဆွမ်းခံရင်း ဌက်သင့်သည်ဆိုတာမျိုး၊ မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲသည်ဟုလည်း သုံးကြပြန်သည်။
ညိုမီရောက်လာခြင်းက ယနေ့အဖို့ စစ်အောင်နှင့် မူတူးတုိ့အတွက် ဖုတ်သွင်းရထားဆိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မီးဇာဆိုသော လုံးလုံးကျစ်ကျစ် ဆော်လေးကို အသားကုန်ဗျင်းပြီး အနားယူနေကြခိုက် ညိုမီရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မူတူးနှင့် စစ်အောင် သည်လိုဂွင်မျိုးခဏခဏရိုက်ကြသည်။ စစ်အောင်ကြောင်းပေးသောလမ်းပေါ်၌ မူတူးက အကယ်ဒမီရှုံးလောက်အောင် ကပြနိုင်စွမ်းရှိသည်။ မူတူးက ရုပ်ရှိသည်။ စစ်အောင်က စစခြင်း " ဟလို ဗိုလ်ကြီးဘာညာ " ဆိုလျှင် သည်ဇာတ်မှာ သူက ဗိုလ်ကြီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိပြီးသား။
" အော်.. ဒါ ကထိက.. ဦးဘယ်သူ "ဆိုလဲဆို သူက တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာပုံစံကို ဖမ်းပြီးသား ဖိုးတွမ်တီးမူတူးနှင့် ဖိုးတွမ်တီးစစ်အောင်တို့ အမှုတွဲများ မှိုတက်နေပြီလားဟု မေးရလောက်အောင် ပိရိကြ၏။
သို့သော် ခေတ်က ပြောင်းလဲနေပြီ။ ဆေးဝါးနှင့် မှောင်ခို ခေတ်စားခဲ့သော ကာလက ဌားရမ်းကြီးပွားစွာနေခဲ့သော တိုက်ကြီးကလဲ ပြန်အပ်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော နောက်ဆုံးကာလလေးမှာ ညိုမီဆိုသော အလှဧကရီတစ်ပါး ရောက်လာခြင်းသည် မုတ်ဆိတ်ပဲပျားစွဲစွဲ လဒစွဲစွဲ ကံကောင်းလေခြင်းဟုတော့ သူတို့နှစ်ဦး ပြုံးမိသွားကြလေသည်။
ညိုမီတကွက်မှားသွားခဲ့ပြီ။ သက်ဆိုင်ရာနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများကို အသိမပေးမိခဲ့ခြင်းက ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးမိသလိုဖြစ်ခဲ့ရသည်။
" ဂျလောင်း.. ဂျောင်း.. ဟဲ.. ဟဲ.. ဟဲ.. "
အိမ်ရှေ့ဘာဂျာ သံတံခါးကို ပိတ်သံသည် မိုးသံလေသံကို ထွင်းဖောက်၍ ကျယ်လောင်စွာမြည်ဟီး သွားသည်။ ဝံပုလွေတကောင်၏ အံကြိတ်ရယ်မောသံကဲ့သို့သော ရယ်သံကြီးက အသွားမတော် တစ်လှမ်းဆိုသော လူကြီးသူမစကားကို အချိန်နှောင်းစွာဖြင့် ညိုမီသတိရသွားလေသည်။
" ဟင်.. ရှင်.. ရှင်တို့.. ဒါဘာလုပ်တာလဲ.. "
" တံခါးပိတ်တာလေ "
ဒေါက်တာဟန်ဝင်းဟု ပုံမှားရိုက်ထားသော မူတူးက ပမာမခန့်လေသံနှင့် ပြောလိုက်သည်။ ညိုမီသည် ကြောက်စိတ်နှင့် ဒေါသတို့ ယှဉ်ကာ ဒူးများ ညွှတ်ခွေချင်သွားသည်။
ညွှတ်ကွင်းတခုကို တက်နင်းမိလိုက်မှန်းလဲသိလိုက်၏။ စစ်အောင်က လက်ထဲမှ တထွာခန့်ရှိသော အာမခံသော့ချောင်းကို ဟန်ပါပါထောင်ပြလိုက်၏။ မီးဇာက ဇဝေဇဝါဖြင့် ဟိုသည်ကြည့်ပြီးမှ ညိုမီထံသို့ပြေးကပ်ခါ နှစ်ယောက်သား ဖက်ထားလိုက်မိကြသည်။
" ဟဲ.. ဟဲ ယုန်ထောင်တာ ယုန်လဲမိ ကြောင်လဲမိပဲကွ "
စစ်အောင်က မင်းသားခေါင်းကို ချွတ်လေပြီ။ ပိုးသားအဝါရောင်တင်းတင်းလေးအောက်မှ ဖုထစ်ရုန်းထနေသော ညိုမီ့တင်ပါးကြီးကို ဖတ်ကနဲ ရိုက်လိုက်၏။ ညိုမီက စက်ဆုတ်ရွံရှာစွာ ပုတ်ထုတ်လိုက်ပေမဲ့ မမီလိုက်။
" ရှင်တို့ မိုက်ရိုင်းလှချည်လား.. ဟင်.. "
ဒေါသကြောင့် ရင်နှစ်မွှာမှာ သွက်သွက်ခါနေ၏။ မို့မောက်လှိုက်ဖိုစွာ ရှုရှိုက်နေသော အသက်ရှုသံက ပြင်းထန်လွန်းနေသည်။
" အော်.. အော်.. မိုက်ရိုင်းတယ်..လား.. ဟေး.. ဟေး.. မိုက်တယ်..ဆိုတာက ဒါမျိုး.. ရိုင်းတယ်ဆိုတာက ဒီလို.. "
စစ်အောင်လက်တဖက်က မီးဇာဂုတ်ပိုးကို ဒုတ်ကနဲ လက်ဝါးစောင်းနှင့် ခုတ်ချလိုက်သည်။ လျှပ်တပြက်အတွင်း ညိုမီ့ကိုယ်လုံးလေးကိုလဲ ဆွဲယူပွေ့ဖက်လိုက်၏။ ခွေကနဲ ငိုက်ဆင်းသွားသော မီးဇာကို မူတူးက ပွေ့ယူပြီး အခန်းတခုထဲသို့ ဝင်သွားသည်။
ညိုမီကိုယ်မှ မွှေးရနံ့က စစ်အောင်၏ ကာမရာဂစိတ်များကို သွေးထိုးပေးလိုဖြစ်နေသည်။ ညိုမီမျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့အောင် တွန်းထိုးရုန်းကန်သည်။ မိုးသံလေသံကြားမှ အချည်းနှီးသော အော်ဟစ်သံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းလဲ ညိုမီသိ၏။ လူယုတ်မာတို့လက်သို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီး ရောက်လာခဲ့မိသော မိမိအပြစ်ကိုသာ နောင်တရမဆုံးဖြစ်နေ၏။ လုံးကျစ်ဖွံ့ထွားသော ညိုမီခန္ဓာကိုယ်လေးအနှံ့ ဒလစပ်ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေသော စစ်အောင်လက်၏ အထိအတွေ့က ညိုမီ့အား သေမင်း၏ စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်ခြင်းခံရသလို အေးစက်တုန်လှုပ်စေသည်။
" အို.. အင့်.. "
ညိုမီ၏ လှပဝိုင်းစက် မို့မောက် လုံးကျစ်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို စစ်အောင် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ဖိညှစ်လိုက်သောအခါ ညိုမီ မျက်ဝန်းတွေ ပြာမိုက်သွားသည်။ စစ်အောင်လက်ကို အတင်းကုတ်ဖဲ့ဆွဲဖယ်ပစ်၏။ ညိုမီ အပေါ်အင်္ကျီရင်စေ့ကြယ်သီးလေးများ ပြုတ်သွား၏။ ဖြူဝင်းသော နို့နှစ်ရောင်ရင်ညွန့်လေးနှစ်မွှာက ထင်းကနဲ ရုန်းကန်ထွက်လာသည်။ ညိုမီ ထမီစကို စစ်အောင်က ခြေမနှင့် ညှပ်ကာ တက်နင်းပြစ်လိုက်ပေရာ ထမီကလဲ ကွင်းလုံးကျွတ်ပုံကျသွားပြန်သည်။
« Reply #12 on: December 23, 2012, 07:59:20 PM »
" ခွေး..လူယုတ်မာ.. မတရားမလုပ်နဲ့.. "
" အို.. မတရားမလုပ်ပါဘူး.. ညိုမီရာ.. ဟဲ.. ဟဲ.. မင်းလဲကောင်း ငါလဲကောင်း.. နှစ်ယောက် ကောင်းမဲ့ အလုပ်လေးပါ "
" ကျ.ကျမကို ချမ်းသာပေးပါ.. ကိုစစ်အောင်ရယ်.. "
" နိုး.. နိုး.. ချမ်းသာပေးရင် လွမ်းစရာလေးတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့.. ဟား.. ဟား "
ညိုမီကရုန်း စစ်အောင်ကဖက်နှင့် လုံးထွေးကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွား၏။ ညိုမီ ကုန်းထသည်။ ငရဲအိုးထဲကျသူနှယ် ကြောက်လန့်တကြားကုတ်တွယ်ထ၏။ သို့သော် စစ်အောင်က အလွတ်မပေး။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဝက်ကိုင်သလို ကိုင်လျက် ကြမ်းတမ်းစွာ ဆွဲလှဲလိုက်၏။ ညိုမီ ဗိုင်းကနဲ ကိုင်ရိုက်သလို လဲကျသွားသည်။ ဖေါင်းအိစွံ့ကားနေသော ပေါင်တံကြီးနှစ်လုံးကြားမှ အောက်ခံဘောင်းဘီအဝါလေးမှာ ခုံးထလုံးဝန်းနေ၏။ ပါးလွှာသော အောက်ခံဘောင်းဘီအောက်မှ မဲမဲနက်နက်စောက်ဖုတ်လေးကို စိတ်လှုပ်ရှားစဖွယ်မြင်လိုက်ရသည်။ ပေါင်နှစ်လုံးကို တင်းကျစ်နေအောင် လိမ်ထားသဖြင့် ညိုမီ၏ ပေါင်ကြီးများမှာ ရှိရင်းစွဲထက် ကြီးမားဖုထစ်နေသည်။
စစ်အောင်က ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ စောက်ဖုတ်ခုံးခုံးကြီးကို လက်ခုပ်ကြီးဖြင့် အုပ်ကိုင်ကာ တရွရွ ဝိုက်ပွတ်လိုက်၏။ ညိုမီခန္ဓာကိုယ်ကို မှောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် စစ်အောင်ခါးမှ လုံချည်နှင့် စွပ်ကျယ်မှာ လေးငါးပေခန့်အကွာသို့ လွှင့်စင်သွားကြ၏။ ကျင့်သားရနေသော စစ်အောင်လက်ကြမ်းကြီးများက နို့နှစ်လုံးကိုလဲ ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေပြန်လေ၏။
ညိုမီတကိုယ်လုံး တုန်ခါလျက် တဆတ်ဆတ်တုံနေ၏။ အံကြိတ်ထားရလွန်းသောကြောင့် အံသွားလေးများ နာကျင်လာသည်။ ဆုပ်ညှစ်ကိုင်တွယ်ထားသော လက်ချောင်းကလေးများ ကျင်ကိုက်လာခဲ့သည်။
" ဖြုတ်.. အိုး.. အမေ့.. "
အောက်ခံဘောင်းဘီအဝါရောင်လေး စစ်အောင်လက်ထဲ၌ တန်းလန်းလေးပါသွားသည်။ ဖူးသစ်စ အငုံပန်းအလှလေးက ရန်ခုန်ထကြွစဖွယ် ပြဲပြဲအာအာလေး ဘွားဘွားကြီးပေါ်လာပြန်သည်။
" အီး.. ဟီး.. ဟီး.. ဟီး.. "
ကြောက်မက်ဖွယ် ရယ်မောသံကြီးကို ဒုတိယအကြိမ်ကြားလိုက်ရပြန်သည်။ စစ်အောင်မျက်လုံးများက မီးဝင်းဝင်းတောက်ကာ ညိုမီ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို စားတော့ဝါးတော့မတတ် ပြူးကျယ်စွာ စိုက်ကြည့်ရင်း တံထွေးကို ဂလုကနဲ မြိုချလိုက်သည်။
အုပ်မိုးလာသော စစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးအား အောက်မှလက်ကလေးများနှင့် စုံထောက်ကာ တွန်းထားကန်ထားရသောကြောင့် ညိုမီ့လက်မောင်းအိုးလေးများ ကွေးညွှတ်လာသည်။
" ငြိမ်.. ငြိမ်.. လေး ခံစမ်းပါဟာ "
နီရဲသော ထိပ်စိုစိုကြီးက ညိုမီ့ပေါင်ရင်းကို ထောက်လိုက်၊ ဗိုက်သားလေးများကို ထိုးလိုက်ဖြင့် ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေ၏။ လိုရာသို့မရောက်လေ စစ်အောင် ဒေါသထွက်လေဖြစ်လာ၏။ ဖင်ကိုလိမ်ကာ ဖယ်ကာ လှုပ်ရှားနေသောကြောင့် ခါးထစ်များနှင့် တင်ပါးကြီးများကို လီးထိပ်ကြီးက ထိုးမိ ထောက်မိပြီး ချော် ချော်ထွက်နေလေသည်။
ထိုသို့ စစ်အောင်လီးထိပ်ကြီး မာမာတောင်တောင်နှင့် အထောက်ခံရလေ ညိုမီ့ရင်မှာ ငိုချင်သလိုလို ရီချင်သလိုလိုနှင့် ဖိန်းရှိန်းပြီး တဒိတ်ဒိတ် ဆောင့်ခုန်လာသည်။ အားခြင်းက မမျှလေသဖြင့်လည်း ညိုမီမောဟိုက်လာသည်။ စစ်အောင် ဒူးတဖက်က ပေါင်ကြားထဲသို့ ထောက်ချလိုက်သည်။
" အ.. အား.. "
ညိုမီ နာကျင်စွာ အော်သည်။ ပေါင်ကို မညာမတာကြီး ကြိတ်ထောက်လိုက်၍ ပေါင်နှစ်ဖက်က နာကျင်စွာ ကားထွက်သွားသည်။ ထိုအခွင့်အရေးကို အလစ်စောင့်နေသော စစ်အောင်က ပေါင်ကြားထဲမှ စောက်ပတ်အဝသို့ မှန်းပြီး လီးကြီးကို ဂမူးရှုးထိုးစိုက်ချလိုက်သည်။
" ပြွတ်.. အို့.. "
လီးကြီးက ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ စောက်ပတ်အဝနှင့်ပွတ်မိပြီး ကြမ်းပြင်ကို ဒုတ်ကနဲထိသည်။ စစ်အောင်က ပြန်ကြွပြီး အနည်းငယ်မော့ကာ ကော့ကာ ထပ်လိုးချလိုက်ပြန်သည်။
" ပြွတ်.. ဘွတ်.. အမေ့.. "
တင်းကြပ်ပူနွေးသော ပေါင်ကြားကို လိုးရသည်မှာပင် စစ်အောင်အတွက်အရသာရှိနေပြန်သည်။ စစ်အောင်က တတိယအကြိမ် ဖင်ကြီးကို ပြန်အကြွ၊ ညိုမီကလည်း ခေါင်းရင်းသို့ကော့အထိုး
" ပြွတ်.. စွတ်.. ဘွတ်.. "
" အီး.. အဟင့်.. ဟင့်.. ဟင့်.. ဟင့်.. "
ညိုမီ့မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ကာ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးသွားရှာလေတော့သည်။]
လီးကြီးက စောက်ပတ်အသစ်လေးထဲသို့ တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီး လိုးဝင်သွားပြီး အံ့ဘွယ်ကောင်းလှသသော ကာမဓါတ်ထူးကြီးကို ထုတ်လွှတ်လိုက်လေရာ ညိုမီ၏ ဖင်ကြီးမှာ အိကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်ခါလျှက် ကော့တက်သွားလေ၏။
ချွန်းတွေ့သော ဆင်ရိုင်းမလေးနှယ် ညိုမီ မလှုပ်ရဲတော့ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့ အင်အားထက်မြက်သော ဆေးတောင့်ကြီး တစ်တောင့် သွတ်သွင်းမြုပ်နှံခံလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ မျက်တောင်လေးများ မှေးစင်းကျသွား၏။
" ပြွတ်.. ဗြစ်.. ပြွတ်.. ဗြစ်.. ပြွတ်.. ဖတ်.. "
ခပ်လေးလေး ခပ်မှန်မှန်လေး ဆောင့်လိုးရင်းမှ တဖြေးဖြေးကြမ်းလာသောအခါ ညိုမီ့တကိုယ်လုံး အပူရှိန်တွေ တက်လာ၏။ အသက်ရှူသံလေးတွေ ပြင်းလာသည်။
" ပြွတ်.. စွတ်.. ပြွတ် စွတ်.. ပြွတ် ကျွတ်.. "
" အင့်.. ဟင်.. အင့် ဟင့်. အင့်.. အင့်.. "
နို့နှစ်လုံးကို စုံကိုင်ကာ ဆောင့်သွင်းလိုက်သော လိုးချက်များကို ညိုမီတသက်လုံး မေ့မရနိုင်လောက်အောင် အသဲစွဲ သွားရပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ စောက်ရည်လေးများ ဖြင်းကနဲ.. ဖြင်းကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်မိရှာလေသည်။
မူးယစ်ဆေး၏ သားကောင် နောင်လတ်တယောက်အတွက်
အပျိုရည်စတေးလိုက်ရသော ချစ်သူနှင့် အစ်မတို့၏ ဘဝဆိုးလေးများကို သိများ သိခဲ့လျှင်ဖြင့်...
Posted by aung at 3:03 AM
မမမောင်လေး ရဲ့ အပြင်းစားရိုက်ချက် သန်မြန်ရွာပြန်မေ...
Sex Is Zero (MOVIEZ)
မေ့အတွက် ချန်ထားဦးနော် ရေးသားသူ.......ချမ်းမြေ့သာ...
““ ထွက်မပြေးနဲ့ ရှက်သွေးလေးရယ် ””
တစ်ချက်ထဲနဲ့ တသက်စွဲပြီ..ရှင့် အာသာပြေ(မန်း)
“ ကာမတောသို့ ရမ္မက်ခရီး ”” (၁) ရေးသူ- အမည်မသိ
" သက်ထား အလိုကျ "
ကြံကြံဖန်ဖန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရေးသားသူ.....အာသာပြေ(မ...
ဒို့ကိုကြိုက်ရင် အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ (ရေးသူ=ရာဂနတ်သား)...
““ နာမှာကြောက်လို့ ”” မန္တလာမောင်မောင်တုတ်
အစက သိခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ရေးသားသူ.......ကမ္ဘာကျော်ရတနာ...
အဆုံးတက်ပေမယ့် အပြုံးမပျက်ပါ ရေးသားသူ------ကာမမင်း...
လက်နှစ်ဖက်နဲ့ လမ်းလျှောက်မယ် မန္တလာမောင်မောင်တုတ်
ကိလေသာ ဓါတ်တိုင် (မန္တလာ မောင်မောင်တုတ်)
ချစ်သွေးကြွချိန် ရေးသူ=ဘိုးရွှေခဲ ရိုက်တင်...
မတော်တရော် ကာမမင်းသားရေး၍ အိပ်မက်သခင် ဖတ်၍ကောင်းေ...
မဗေဒါအန်ကိုခဲ ရေးသူ=အမည်မသိ ရိုက်တင်ပေး...
နှောင်းအတိတ်မှ အို လွမ်းဖွယ်.....( သူမ နဲ့ကျွန်ေ...
နှောင်းအတိတ်မှ အို လွမ်းဖွယ်.....( သူမ နဲ့ကြားကာ...
သူဌေးကတော်လေး ငယ်ငယ် ..... အပိုင်း ၁
မရွယ်ပဲ ဆူး မင်းဖြစ်
ကျနော်ဟာ လူဆိုး မောင်သာဒိုး
ဒေါ်ရွှေ နဲ့ ကျွန်တော်
သမီး ရဲ့ ဦး